अर्को साल बिहे गर्छु; छुट्टी मिलाएर दुई महिना अघि नै आइज है बुनु” भनेका दाजुको कसरी म,ला,मी जान सकूँ ? महान चेली समिक्षाको रो,द,न (भिडियो सहित) - Like For Nepal
अर्को साल बिहे गर्छु; छुट्टी मिलाएर दुई महिना अघि नै आइज है बुनु” भनेका दाजुको कसरी म,ला,मी जान सकूँ ? महान चेली समिक्षाको रो,द,न (भिडियो सहित)
February 23, 2021 February 23, 2021 by fornepal
अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको नेपालको संविधानको धारा ७६ लेख्ने र त्यसमा ल्याप्चे लगाएर सदर गर्ने तत्कालीन संविधानसभाका सदस्यहरूले त्यसको फरक–फरक व्याख्या गरिरहेका छन्। सुवास नेम्बाङले गरेको व्याख्याको ठीक विपरीत व्याख्या अग्नि सापकोटाले गरेका छन्। यो संविधान निर्माणको श्रेय लिने दलका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानमा छैन भनेको अधिकारलाई ईश्वर पोखरेल र टोपबहादुर रायमाझीले छ भनेका छन्।
आफैले कोरेका वाक्यहरूको परस्पर विरोधी व्याख्या गर्नुले संविधान निर्माणकर्ताको क्षमता, इमानदारी र नियतमा शंका उत्पन्न हुन्छ। पाठ्यसामग्री नबुझेको शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइएका विद्यार्थीको जस्तो हविगत तिनका कार्यकर्ताको छ। अलमलमा नागरिक समाज पनि छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिन्छ वा दिँदैन भन्ने प्रश्नको जबाफ कहाँबाट खोज्ने ? जनतालाई सडकमा उतारेर ? गरिबको ट्याक्सी जलाएर ? नेपाल बन्द गरेर ? वा कानुन व्यवसायीले मिडियामा बहस गरेर ? वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान नेपालको संविधानमा भएबमोजिम नखोजेर सडकबाट बलपूर्वक खोजियो भने त्यसमा नागरिक समाजको विमति हुनुपर्ने हो किनभने नागरिक समाज ‘जसो–जसो बाहुन बाजे उसै–उसै स्वाहा’ भन्ने लम्पट कार्यकर्ताको समूह होइन।
कांग्रेसले २०५९÷६० सालतिर प्रतिगमनका विरुद्ध सडक संघर्ष आह्वान गरेको बेलामा कांग्रेसका एकजना भ्रष्टाचारमा आरोपित नेताको सहभागिताको विषयलाई लिएर नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको थियो। त्यस्ताको नेतृत्वमा सडकमा नआउने अडान लिएको थियो। जसको मञ्चमा आज पत्रकार नारायण वाग्ले देखिएका छन्, ती नेताहरूको पृष्ठभूमि स्वच्छ छैन। तिनलाई लागेका आरोपको प्रकृति जघन्य छ र सूची लामो छ। ओलीको कदम बेठीक छ तर ट्याक्सी जलाएको आरोपको कालो दाग वाग्ले जस्ता अग्रज पत्रकारको निधारमा पोतिनु पनि उत्तिक्कै खतरनाक हुन्छ। अदालतका विरुद्ध फैलाइएको अफवाहको अपजस पनि नागरिक समाजको हिस्सामा पर्नु हुँदैन। नेपाल बन्द गर्ने र हिंसा मच्चाउने नेतासँग नागरिक समाजका अगुवाले साझा मञ्च प्रयोग गरेर कलंकको हिस्सेदार हुनु हुँदैन। कलंकित नागरिक समाज लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन्छ।
Prevअनिता खड्काको छिमेकीको झन् द*र्दनाक,अस्प*तालमै चल्यो रुवाबा*सी,15 महिना देखि बि*जोक (कृपया सहयोग स्वरुप सेयर गराै)
Nextखुशीको खबर। कन्चनको स्वा’स्थमा आयो सुधार , 51 औ दिनमा यस्तो हजुरआमाले सकिन्न आफुलाई सम्हा*ल्न। भिडियो हेर्नुहोस